Dare reSeneti Rinotadziswa Zvakare neMDC-T Kuita Basa Raro
Dare reseneti ratadza zvakare neChitatu kuita basa sezvo maseneta eMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, aenderera mberi achiratidzira kusafara kwawo nekupinda mudare kwemagavhuna akasarudzwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, zviri kunze kwechibvumirano che Global Political Agreement, kana kuti GPA.
Maseneta eMDC-T atanga kuimba nekutamba apo mutungamiri wedare iri, uye vari nhengo yeZanu PF, Amai Edinah Madzongwe, vapedza kuita munamato wekuti basa richitanga mudare iri.
Seneta weMDC-T, VaTichaona Mudzingwa vabva vasimuka vachiti mudare mange muine vanhu vange vasingafanirwi kuvemo uye Amai Madzongwe vange vachityora mutemo nekurega vanhu ava vari mudare iri.
Vamwe vavo vabva vatanga kuimba uye izvi zvaitika kwemaminitsi makumi maviri nemashanu zvabva zvakonzera kuti Amai Madzomgwe vamise basa mudare iri. Amai Madzongwe vaita izvi mushure mekunge gavhuna weZanu PF, Thokozile Mathuthu, vakumbira kuti dare richerega kugara kudzamara China.
Vanokokera maseneta eMDC T, Amai Gladys Dube, vati bato ravo richiramba richiratidzira kudzamara vatungamiri vehurumende vagara pasi kuti vaite zvavakatenderana.
Vanokokera maseneta eZanu PF, Amai Tambudzai Mohadi, vati magavhuna ese akasarudzwa zviri pamutemo uye havawoni zvakaipa pakuti magavhuna aya auuye kudare iri.
Vati havana zvavangakwanisa kuita vakati nyaya iyi vave kuisiyira kuvatungamiri vehuruemende yemubatanidzwa, VaMugabe, VaTsvangirai, naVaMutambara kuti vaigadzirise.
Ishe Enos Musarurwa vekuChikomba kuMashonaland East, avo vanove nhengo yeseneti vati vari kukatyamdzwa nemaitiro emaseneta eMDC T vachiti anofanira kutevedza gwara rekugadzirisa zvichemo kwete kukanganisa dare reseneti.
NeChipiri mudare maive nagavhuna mumwe chete uye neChitatu mamwe magavhuna anosanganisira VaFaber Chidarikire vekuMashonaland West, VaJason Machaya vekuMidlands, VaDavid Karimanzira vemuHarare, Amai Mathuthu vekuMatabeleland North pamwe VaMartina Dinha veMashonaland Central, vange varimowo mudare.
VaDinha vati vacharamba vachiuya kudare iri nekuti vakasarudzwa naVaMugabe zviri pamutemo. Vati kana MDC T isiri kufara nazvo ngaibude mumapazi ese ehurumende kuitira kuti nyika ibve yaita sarudzo nekukasika.